ဂရင်းနစ်စံချိန်တင်နိုင်အောင် ရေခဲတောင်ထိပ်မှာ အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် | Buzzy News from Myanmar
Hey Buzzy News from Myanmar Community!
Local Cele News
Copyright © 2019 Buzzy News from Myanmar. All rights reserved.
ဂရင်းနစ်စံချိန်တင်နိုင်အောင် ရေခဲတောင်ထိပ်မှာ အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
Local Cele News News
သရုပ်ဆောင်၊ မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ Sexy Model တစ်ဦးအဖြစ်လူသိများအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီး အနုပညာအရည်အချင်း ပြည့်ဝတဲ့ သင်ဇာက ကြော်ငြာ၊ ဗီဒီယိုနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေများစွာ ရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်။ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်တဲ့ မျက်နှာလှလှလေးကြောင့် မြင်သူတိုင်းစွဲမက်ရတဲ့ သင်ဇာက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမိုက်စား Body လေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုရိသတွေကို ရူးခါသွားစေလောက်အောင် ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ ဖမ်းစားတတ်တဲ့ သင်ဇာက အခုလည်း ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်စေမယ့်ပုံရိပ်တွေကို တင်ထားပါတယ်။ ရေခဲတောင်ကြီးကို မျက်နှာမူပြီး အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းနေတဲ့ သင်ဇာရဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့ မြင်သူတိုင်းရင်ကို တုန်လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။သင်ဇာရဲ့ ဖြူဖွေးဝင်းမွတ်တဲ့ ကျောပြင်လေးနဲ့ Body အလှတွေကလည်း အားလုံးရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကို မြန်စေခဲ့ပြန်ပါတယ
ပရိသတ်ကြီးအတွက် သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ရေခဲတောင်ပေါ်မှာ အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးကလဲ သဘောကျရင် Share ပေးသွားကြပါဦးနော်
ဂရငျးနဈစံခြိနျတငျနိုငျအောငျ ရခေဲတောငျထိပျမှာ အပျေါပိုငျးဗလာနဲ့ ဓာတျပုံရိုကျခဲ့တဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျော
သရုပျဆောငျ၊ မငျးသမီးခြောလေး သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ Sexy Model တဈဦးအဖွဈလူသိမြားအောငျမွငျလာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦး ဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျကောငျးပွီး အနုပညာအရညျအခငျြး ပွညျ့ဝတဲ့ သငျဇာက ကွျောငွာ၊ ဗီဒီယိုနဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှမြေားစှာ ရိုကျကူးခဲ့ရပါတယျ။ ပွဈမြိုးမှဲ့မထငျတဲ့ မကျြနှာလှလှလေးကွောငျ့ မွငျသူတိုငျးစှဲမကျရတဲ့ သငျဇာက ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အမိုကျစား Body လေးကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားသူ ဖွဈပါတယျ။
ပုရိသတှကေို ရူးခါသှားစလေောကျအောငျ ကောကျကွောငျးအလှတှနေဲ့ ဖမျးစားတတျတဲ့ သငျဇာက အခုလညျး ပါးစပျအဟောငျးသား ဖွဈစမေယျ့ပုံရိပျတှကေို တငျထားပါတယျ။ ရခေဲတောငျကွီးကို မကျြနှာမူပွီး အပျေါပိုငျးဗလာနဲ့ ဓာတျဖမျးနတေဲ့ သငျဇာရဲ့ပုံရိပျတှကေတော့ မွငျသူတိုငျးရငျကို တုနျလှုပျစခေဲ့ပါတယျ။သငျဇာရဲ့ ဖွူဖှေးဝငျးမှတျတဲ့ ကြောပွငျလေးနဲ့ Body အလှတှကေလညျး အားလုံးရဲ့ ရငျခုနျသံတှကေို မွနျစခေဲ့ပွနျပါတယ
ပရိသတျကွီးအတှကျ သငျဇာဝငျ့ကြျောရဲ့ ရခေဲတောငျပျေါမှာ အပျေါပိုငျးဗလာနဲ့ ရိုကျထားတဲ့ပုံရိပျလေးတှကေိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ ပရိသတျကွီးကလဲ သဘောကရြငျ Share ပေးသှားကွပါဦးနျော။
ဆွဲမက်ဖွယ် ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းနဲ့ အလှမယ် ဝေရီနှင်းစက်
အကယ်ဒမီပွဲမှာ ဘယ်လိုအဆန်းထွင်မလဲ ပြောပြတဲ့ စည်သူ ပလပ်ကျွတ်
ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ Sexy ကျကျ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေနဲ့ လန်းနေတဲ့ စူးရှထက်
Wedding Dress နဲ့ ပုံလေးတွေတင်လိုက်တာကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာလားလို့ ပရိသတ်တွေစိုးရိမ်နေကြတဲ့ ယဉ်လက် | Peti Myanmar
နာရီပိုင်းအတွင်း ကြည့်ရှုသူ များပြားနေတဲ့ Gfatt ရဲ့ စစ်သီချင်းကို သီဆိုခဲ့တဲ့ ကလေး ဗီဒီယို
မဂ္ဂဇင်းအတွက် ပုံအမိုက်စားလေးတွေ ရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ဗီလိန်နေရာသရုပ်မဆောင်ရဲတော့ကြောင်း ပရိသတ်ကိုအသိပေးလိုက်တဲ့ သံသာမိုးသိမ့်
ရွှေထူးက ကိုယ့်ထက်ဆရာကျနေပြီဆိုတဲ့ မိုးစက်ဝိုင်း | Lwin Pyin News
မိန်းမ တွေ ကို ဘယ်တော့ မှ အရက်မတိုက် နဲ့ | Lwin Pyin News